I-Huawei P Smart 2019: uyilo oluvunyiweyo, amanqaku kunye nexabiso | I-Androidsis
IHuawei P Smart 2019: imifanekiso yokuqala kunye neempawu ezivuzayo
Namhlanje sinokuthi ekugqibeleni sazi ezinye zeempawu ukuba entsha yeHuawei P Smart ukusuka ngo-2019 Ngokuvuza, umzekelo, inxenye yeempawu zobuchwephesha zento ekujongwe ukuba ibe yenye yeendlela ekunokukhethwa kuzo ukuba ujonge ifowuni ye-Android ekumgangatho ophakathi ngexabiso eliphakathi.
Ezinye zeenkcukacha esizaziyo malunga neHuawei P Smart 2019 entsha kukuba iya kubandakanya inotshi yesikrini, Ifana ncam naleyo ye- Huawei Mate 20. Ngokubhekisele kwiscreen, siyazi nokuba ubungakanani buya kuba nombulelo: inokufikelela phantse kwi intshi ezintandathu screen kunye iya kuba nepaneli yohlobo lwe-IPS.
Iimpawu eziphambili zeHuawei P Smart ye2019
Enye yezinto ezibalulekileyo kwizithuthi zethu kukugcinwa kwangaphakathi kunye nememori. Ngale ndlela, iHuawei P Smart 2019 iya kuba neemodeli ezimbini ezahlukeneyo, ine-3GB kunye ne-4GB ye-RAM nganye, ngokwahlukeneyo, kunye neendlela ezimbini ze-32GB kunye ne-64GB yokugcina. Ukongeza, siya kuba nethuba lokufaka amakhadi e-MicroSD ukonwabela imemori enkulu.
Olunye lokuvuza oluye lwavela kakhulu malunga nale smartphone intsha kukuba iya kuba nayo Iprosesa yaseKirin 710, uphawu lwe-SoC yakho eseShenzhen. Emva kweKirin 659, eyona sinokuthi siyifumane okwangoku kwizixhobo zeHuawei, le SoC ithathe indawo enkulu, ineetekhnoloji ezisibhozo ngaphakathi kuyo ezenziwe kwinkqubo ye-nanometer eyi-12.
Ngokubhekisele kuyilo kunye nekhamera, iinkcukacha zokuvuza zibonisa ukuba iHuawei P Smart, njengoko iqhelekile phakathi kuluhlu / izixhobo zokugqibela, iya kuba nomfundi ofaka iminwe, efana nezinye iimodeli zangaphambili ziya kufumaneka ngasemva. Njengoluvo ikhamera ngasentla ngasekhohloukuya. Ngokubhekisele kwibhetri yayo, naziphi na iinkcukacha ngayo azikaziwa. Into esiyaziyo kukuba iya kuba ne-port encinci ye-USB, enokuba ziindaba ezimbi kwabanye abasebenzisi.
Okwangoku sinokulinda kuphela ukuba sazi yonke i-cIimpawu ze-2019 zeHuawei P Smart, apho kuvela ukuvuza siyazi ukuba iyakuphehlelelwa kwintengiso ngoJanuwari 2019, kwaye iyakuba yindawo ekumgangatho ophakathi we-smartphone eya kubiza ngeenxa zonke. 200 euro eyona modeli yoqoqosho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei P Smart 2019: imifanekiso yokuqala kunye neempawu ezivuzayo
Ukuqhuma kokukhanya kweNeon kwiscreen sakho esiphathwayo ngoKhuselo lweNdawo engapheliyo
[APK] Udlala njani iMinecraft mahala